ဘေဘီလေးတွေကလည်း တစ်ယောက်တည်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော် - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » မိဘများအတွက်လမ်းညွှန် » ဘေဘီလေးတွေကလည်း တစ်ယောက်တည်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်
စိတ်တွေပင်ပန်းနေလို့ တစ်ယောက်တည်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားက လူကြီးတွေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ထင်စရာရှိပါတယ်နော်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ဘေဘီလေးတွေကလည်း တစ်ယောက်တည်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ သူတို့လေးတွေက ကလေးမို့ ဘာမှတွေးစရာမရှိဘူး။ ငယ်လွန်းသေးတော့ တစ်ယောက်တည်းထားလို့ မဖြစ်ဘူး၊ အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို နည်းနည်းလောက်လျှော့ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။
ဘေဘီလေးကို တစ်ယောက်တည်းနေဖို့ အချိန်ပေးသင့်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ကလေးကိုချစ်လို့ ကလေးအိပ်နေချိန်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ကလေးဘေးထိုင်လို့ဖြစ်ဖြစ် ကလေးကို ချီပွေ့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖစ် ကလေးနဲ့တစ်ချိန်လုံးဆော့ချင်နေမယ်ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်။ အမြဲကစားပေးဖော်ရတဲ့မေမေဖေဖေတို့ကိုလည်း ကလေးက အသည်းစွဲချစ်မယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကလေးကို တစ်နေ့တာလုံးမှာ ၁၀ မိနစ် ကနေ ၁၅ မိနစ်လောက်ထိ တစ်ယောက်တည်းနေဖို့အချိန်ပေးလိုက်ပါ။
ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရတာဲဆိုတော့ ကလေးကို တစ်ယောက်တည်းနေဖို့ အချိန်ပေးလိုက်တာက ကလေးကို စူးစမ်းခွင့်ရစေသလို ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားနဲ့ အခြားသောအရာတွေကိုလေ့လာသင်ယူခွင့်ရစေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကလေးကို အမှီအခိုကင်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတိုးစေမှာပါ။ စိတ်ကူးအတွေးဉာဏ်ရင့်သန်လို့ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ ဆိုရင် ကလေးကို တစ်ယောက်တည်း စဉ်းစားချိန်ပေးဖို့ကလည်းကျော်သွားလို့ မဖြစ်တဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့။
ကလေးကို တစ်ယောက်တည်းထားရမယ်ဆိုတိုင်း ဒီအတိုင်းထားလိုက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အခင်းခင်းလို့ နူးညံ့တဲ့စောင် ဒါမှမဟုတ်ကော်ဇောခင်းပါပြီးရင် ကလေးကစားလို့အဆင်ပြေမယ့် အရုပ်လေးတွေထားပေးပါ။ ကလေးကမှောက်နိုင်နေပြီဆိုရင်တော့မှောက်ရက်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးက မမှောက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ခေါင်းအုံးလေးနဲ့ပက်လက်အနေအထားထားပေးပါ။ ထိခိုက်မိနိုင်တာတွေကိုဘေးနားကနေ ဖယ်ထားဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ကလေးကို ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေတော့စောင့်ကြည့်နေပေးပါနော်။ ကလေးက တစ်ယောက်တည်းနေရတာပျင်းလာရင်ဖြစ်ဖြစ်မှောက်တာကို ပင်ပန်းလာပြီဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ် ကလေးကိုချက်ချင်းပွေ့ချီပေးပါ။ ကလေးကို အသက် တစ်နှစ်အောက်ကစလို့ အရွယ်ရောက်လာသည်အထိတစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ် ကနေ အများဆုံး မိနစ် ၂၀ အထိ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးပေးပါ။ ထမင်းစားပြီးချိန်၊ အိပ်ရာမဝင်ခင်အချိန်တွေမှာ ကလေးကို သီးသန့်အချိန်လေးတွေပေးပြီး သူ့စိတ်ကူးလေးအတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးနေခွင့်ပေးတာက ကလေးကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာစေဖို့ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာပါ။
ဒါကြောင့်မေမေဖေဖေတို့ကိုပြောချင်တာက ကလေးလေးတွေက စိတ်ညစ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်တောင် စဉ်းစားစရာလေးတွေရှိနေနိုင်တာမို့ အတွေးလေးတွေကိုပြီးပြည့်စုံအောင်တွေးလို့ အမှီအခိုကင်းကင်းရပ်တည်နေနိုင်စေဖို့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးပေးဖို့ပြောပါရစေနော်။ဘေဘီလေးတွေတစ်ခါတလေတစ်ယောက်တည်း စကားပြောရင်းငေးမိငေးရာငေးနေတာတွေက သူတို့လေးတွေတွေးနေတာပါနော်။ အတွေးအာရုံမပျက်သွားအောင်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပေးလိုက်ပါနော်။ ဘေဘီလေးတွေလည်း တစ်ယောက်တည်းတွေးတောဖို့ အချိန်လိုပါကြောင်း…………………
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဧပြီ 19, 2019 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဧပြီ 19, 2019
How much do I have to play and interact with my baby? Do babies need time alone?https://www.babycenter.com/404_how-much-do-i-have-to-play-and-interact-with-my-baby-do-babi_6882.bc Accessed Date 19 April 2019
Should Babies Have 'Alone' Time? Experts Weigh Inhttps://www.romper.com/p/should-babies-have-alone-time-experts-weigh-in-77629 Accessed Date 19 April 2019